Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Denmark, oo Martiqaad ka Heshay Dawlad Degaanka Somalida – Rasaasa News
Dec 14, 2010 Dawlad Degaanka Somalida, Eritrea, ethiopia, Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Denmark oo Martiqaad ka Heshay, Ogaden, somalia
Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Denmark ayaa noqotay Jaaliyadii ugu horeysay ee si rasmi ah marti qaad uga heshay dawlad degaanka Somalida tan iyo intii ay nabadu ka dhalatay degaanka Somalida, ka dib kolkii ay ururada ONLF iyo UWSLF heshiisyo nabadeed la galeen dawlada Federalka ah.
Wafti uu hogaaminayo gudoomiyaha Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Denmark ayaa shalay oo Isniin ahayd waxaa ay gaadheen magaalada Addis Ababa.
Gudoomiyaha Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee Denmark mudane Dhuux Cabdi Cumar, ayaa hor baxanyo u ah xubno gaadhaya 35 ruux oo ka mid ah Jaaliyada. Waxaa gudoomiyaha ka horeeyey oo haatan Addis Ababa ku sugan Gudoomiye xigeenka Jaaliyada Ibrahin Cabdala iyo xubno kale.
Gudoomiyaha Jaaliyada ayaa hore u yimid degaanka Somalida kana qayb galay xafladii saxiixa heshiiskii dawlada iyo ururuka ONLF oo ka dhacay Addis Ababa bilowgii bishii October 2010.
Ujeedada socdaalka Jaaliyada ayaa ah in ay indhahooda ku soo arkaan, isbadalka nabadeed ee ka dhashay heshiisyadii nabada ee ay wada galeen dawlada dhexe iyo ururada ONLF iyo UWSLF.
Waftigu waxay socdaal ku tagi doonaan magaalada Jijiga, halkaas oo ay dawlada degaanku ku tusi doonto, isbadalada ay ka samaysay magaalada Jijiga. Waxaa kale oo ay waftigu indhahooda kaga bogan doonaan hawlaha ay ummada u qabtaan xafiismadaxeedyada iyo mashaariicda ay ka hirgaliyeen dalka.
Wali lama ogga in waftiga Jaaliyada Ogadeeniya ee Denmark in ay u gudbi doonaan qaar ka mid ah gabalada dalka iyo in ay ku ekaan doonto magaalada Jijiga oo iyadu ah xarunta degaanka Somalida, horena uga badbaaday colaadihii ka jiray degaanka.
Warar ayaa sheegaya in waftiga Jaaliyadu ay la kulmidoonaan R/wasaaraha dalka, laakiin lama sheegin ujeedada kulankooda iyo waliba arimaha ay kala hadlidoonaan midna.
Dhinaca kale M/weynaha degaanka Somalida oo haatan ku sugan magaalada Addis Abab, oo uu kaga qaybgalayey maalinta qoomiyadaha Itobiya, ayaa maanta la kulmay masuuliyiinta Jaaliyada Denmark.
Waxaa la filayaa in Jaaliyadaha Somalida Ogadeeniya ee dalalka Yurub iyo Waqooyiga Maraykanku in ay iyaguna socdaalo ku imandoonaan degaanka Somalida Ogadeeniya. Wali lama sheegin in ay wada jir hal mar u iman doonaan iyo in ay gooni gooni u iman doonaan sida Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee dalka Denmark.
Imaatinka Jaaliyadaha Somalida Ogadeeniya ay dib ugu soo laabanayaan dalka ayaa waxay dhiiri galinaysaa dhismaha degaanka Somalida Ogadeeniya, ka dib marka ay maal gashadaaan dadka dibadaha ka imanaya ee u dhashay degaanka iyo dadaalada horumarinta mashaariiceed ee ay wado dawlad degaanka Somalidu.
Balan qaadkii dawlada dhexe ayaa ah nabada ka dib in ay dawlado ka qaado degaanka Somalida talaabooyin horumarineed oo deg deg ah lana taaban karo.